China Arina boribory boribory borosy nify antibacterial factory sy mpanamboatra | Enyuan
Ny fitaovana dia vita amin'ny landy tsara sy volo malefaka. Ny lahasa lehibe indrindra dia ny fanadiovana, ny fanamafisana ny lela ary ny fanadiovana siligaoma. Ny filamentan'ny borosy nify arina volotsangana dia misy poti-karbaona mihetsika mba hikarakarana lalina sy hanadiovana ny siligaoma
anaran'ny vokatra Borosy borosy boribory arina
Fitaovana boribory Tariby karbaona
Tariby boribory nafarana: ny volom-borona marobe amin'ny zoro dia afaka mampitombo ny faritra misy ny nifiny ary manampy amin'ny fanadiovana ny nify
Volom-bolo antonony: mora kokoa ny volomaso malefaka sy mafy manadio ny takelaka maditra nefa tsy manimba siligaoma
Fitaovana tsy mitongilana: famolavolana streamline, tahony malefaka sy ahazoana aina.
Ny fiasan'ny borosy nify arina volotsangana
1. Hery tsy manam-paharoa-porofon'ny hamandoana, hery miady amin'ny bakteria ary manafotsy
Ny volom-borona dia vita amin'ny arina volotsangana vita amin'ny volom-borona malefaka. Raha ampitahaina amin'ny volom-borona mahazatra dia manana hery manaporofo ny hamandoana sy anti-bakteria ary adsorption mahery izy ireo, izay mitazona ny volomaso maina sy mampihena ny vitan'ny fiterahana. Ny bristles koa dia misy iôna mavitrika amin'ny arina volotsangana C, izay afaka mamoaka ion-ôksizena ratsy sy taratra infrared, mora mametaka takelaka eo ambonin'ny nify, ary mahatonga ny nify ho salama sy fotsy kokoa.
2. Esory mora foana ny takelaka nify
Ny volon-tratra dia misy ion-n'ny saribao volomparasy C, izay mora mandray takelaka amin'ny tampon'ny nify, mahasalama sy fotsy ny nify. Ny savaivon'ny faran'ny volon'ondry volotsangana tena tsara dia kely noho ny an'ny volom-borona tsotra, ary afaka miditra lalina any amin'ny banga tsy zakan'ny volom-borona tsotra izy io. Miaro ny siligao ny fahasimbana avy amin'ny volon'afotsy marefo sy be mpitroka.
3. Hery lehibe hanadiovana
Ny loha borosy nify dia mora kokoa ny mikitika ny tampon'ny nify, mampitombo ny fikorontanana ary manatsara ny hery fanadiovana. Araka ny fanaraha-maso sy fanamarinana nataon'ny andrim-panjakana manampahefana: ny fahadiovan'ny borosy nify arina volotsangana dia 10 heny noho ny borosy nify mahazatra.
Previous: Borosy nify maranitra maranitra
Manaraka: Borosy borosy malefaka vita amin'ny volon'olon-dehibe